၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်ပြုပေးရေး MPU အဖွဲ့ အဆိုပြု
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို တနည်းနည်းနဲ့ အသိအမှတ်မပြုသ၍ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြည်ပအခြေစိုက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ (MPU) က ဒီကနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ကျင်းပသည့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်မှု နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသူများကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့က ကြိုဆိုနေသည့် မှတ်တမ်းပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့မှာပင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်သို့ အဖွဲ့ဝင်တချို့ ချီတက်ခဲ့ရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က လူစုကို ဖြိုခွဲပြီး လူ ၁၅ ဦး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
မေလ (၂၇) ရက် ဒီကနေ့ဟာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တုန်းက စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး မဲဆန္ဒနယ် (၄၈၅) နေရာမှာ NLD ပါတီက (၃၉၂) နေရာ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့တဲ့နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က အသိအမှတ် မပြုခဲ့ပေမယ့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က နည်းလမ်းတွေရှာပြီး အသိမှတ်ပြုမှသာ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေ ပြေလည်နိုင်ဖွယ်ရာ ရှိတယ်လို့ (MPU) အဖွဲ့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်အေးက ပြောပါတယ်။
"၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ဒီ န၀တ နအဖအစိုးရ လက်ထက်က လစ်လျူရှုခဲ့တယ်။ အခု ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အနေနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မြင်တယ်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က နည်းလမ်းတွေရှာပြီး ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အသိအမှတ်ပြုမယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးစေချင်တယ်။ သမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို မဖြေရှင်းသမျှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ် ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။ လွှတ်တော်တွင်းမှာ သာမကဘဲ လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ အမျိုးသားညီလာခံလိုခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးစေချင်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ တင်ပြထားပါတယ်။"
လက်ရှိ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD ပါတီ မန္တလေးတိုင်း ကိုယ်စားလှယ်တဦး ဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်အေး ပြောသွားတာပါ။
MPU ရဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာတော့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီး အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကြေညာဖို့၊ ကျန်နေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အင်အားစု အားလုံး ပါဝင်နိုင်မယ့် အမျိုးသား ညီလာခံကြီးတရပ် ခေါ်ယူပြီး နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဥပဒေရေးရာ ကော်မရှင်နဲ့ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များ အသစ်ဖွဲ့စည်း
ကျန်ရှိအနိုင်ရ ကိုယ်စား လှယ်လောင်းစာရင်း ရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင် ကြေညာ
NLD ပါတီ ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းနိုင်နေပြီ လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြော
NLD ကိုယ်စားလှယ် ၄၉၀ ရရှိနေ
မဲရလဒ် လွဲမှားမယ့်အရေး မဲဆန္ဒရှင်တွေ စိုးရိမ်ပူပန်
ဒေါ်စုနှင့်ဦးအောင်ကြည် ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက် MPU ကြိုဆို
ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒကို လေးစားဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
ကြောင်တောင်တောင်- တောင်းဆိုမှုတွေလျှောက်လုပ်မနေနဲ့ မောင်မောင်းအေးနဲ့ အပေါင်းပါတို့ရေ..။
May 28, 2012 09:31 AM
၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပြောယင် တပြည်လုံးခံစားခဲ.ရတာပါ
ငါတို့မပါသမျှ မပြေလည်ဘူးဆိုတဲ. သူဟာသဘောထားမမှန်ဘူးနော်
May 28, 2012 07:47 AM
Ko Nay Oo lin
May 28, 2012 02:05 AM
နိုင်ငအရေးချစ်မြတ်နိုးရင် ပြည်တွင်းကိုပြန်ဝင်ပြီး ဒေါ်စုနဲ့လက်တွဲလိုက်ပါ။ နေရာ ရမှ ၀န်ကြီးဖြစ်မှ လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်မှ ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်များရှိနေသေးရင် ပြန်အိပ်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
May 28, 2012 12:42 AM
Disappointed. They all have been recorded officially in the history and Daw Suu's also decided to go in Hlut Taw. I have no idea what they need more. The should go back to country do what Burmese people needs. After doing something for Burmese people in the country they can ask for what they want. Please do what you can if you stay outside country. Put aside MPU or NLD LA whatever. Pointless..???
May 27, 2012 08:00 PM